Inyama yenkomo yaseChina enkonkxiweyo eneShelf ende yokuVelisa kunye neFactory | HUIQUAN
340g yenkomo yenkomo yesidlo sasemini Inyama
1. FAKA ESISONKENI
2. EQAKATHWE NGEMIFUNO
3. YOQWE NGERAyisi
"Inkomo yenkomo" yenziwe ngeenkozo zetyuwa. Yenziwa ngokugcina amaqhekeza enyama ebilisiweyo enetyuwa erhabaxa uze uyicinezele kwiitoti. EUnited States, ngokuqhelekileyo yenziwa ngamaqhekeza amakhulu enyama yenkomo (ibele) ebiliswe ngetyuwa. Ibizwa ngokuba yinyama yenkomo enkonkxiweyo.
[Iresiphi eBomvu yomnatha] Inyama yenkomo enkonkxiweyo + iJuice yeVegetable + Curry Block = Inyama yeCurry emnandi
1. Lungisa izixhobo
2. Vula inyama yenkomo enkonkxiweyo.
3. Beka inyama yenkomo kwisitya kwaye uyityumle ngepuni.
4. Bamba kancinci ukuhlobisa.
5. Thela ijusi yemifuno kwaye ugxobhoze ngokulinganayo, yongeza i-curry cubes.
6. Gubungela ngeplastiki kunye nokufudumala kubushushu obuphakathi kwemizuzu emi-3 kunye nesiqingatha, uvuselela kube kanye endleleni.
7. I-curry yenkomo emnandi ilungile. (Lumka ungatshisi izandla zakho!)
8. Beka irayisi epleyitini, ugalele ikheri yenkomo, yongeza inyama yenkomo ukuze uyihombise, kwaye wongeze imifuno yakho oyithandayo. Irayisi yenkomo ye-curry emnandi ilungile!
Inyama yenkomo, istatshi, isosi yesoya, iswekile, ityuwa, ioli yemifuno esulungekisiweyo, Iziqholo.
I-Tin pack: Ileyibhile yephepha yetoti; Itoti eprintiweyo
VULA KULULA;VULA NGESIQINISO
Inkcazo Umthamo we-1X20FCL
3. Ixesha lokuhambisa:
Iintsuku ezingama-35-60 emva kokufumana intlawulo yangaphambili yentsebenziswano yokuqala kunye nathi. Iiodolo zesiqhelo zifuna nje malunga neentsuku ezingama-30 ukugqiba.
(1) Ngokuqhelekileyo kwisitya esinye se-20FCL, siqulethe inkonzo yemveliso, ukuthumela, ukuhlolwa kwempahla, ukubhengezwa kwecustoms, ect.
Amava: Sineminyaka engaphezu kwe-13 yamava ekuveliseni zonke iintlobo zokutya okunkonkxiweyo, okufana nenyama etyiweyo, iNyama yeLuncheon, iPudding yeRice, iMushroom, njl. Siyazazi iintlobo ezininzi zetekhnoloji yokuvelisa ekuveliseni ukutya okunkonkxiweyo kwaye sineengcali ekukuveliseni.
Iqela: Kunye neqela lobuchwephesha bokuvelisa, ukulawula kunye nokuthengisa izinto zetekhnoloji ezingundoqo zinamava angaphezulu kwe-10years kushishino.
Ukufikelelwa kweHlabathi: Sinabathengi abavela kumazwe amaninzi, anje ngeSolomon, Philippines, Mauritius, Papua New Guinea, Malaysia, India, ect.
I-advanteji: Singabonelela ngazo zombini ibhrendi yethu kunye nemveliso yebrand yakho. Kananjalo sinokunikezela phantse zonke iimveliso zemodeli efunekayo inombolo.Kwaye imveliso yethu izinzile kwaye ilungile xa ithelekiswa nabakhuphisana abaninzi.
Buza: Ngaba ungandixelela ukuba zeziphi iintlobo zenyama yenkomo enkonkxiweyo onokunikela ngayo?
Impendulo: Ewe kunjalo. Singavelisa inyama yehagu yesidlo sasemini, inyama yenkukhu yesidlo sasemini, inyama yesidlo sasemini, inyama yehagu yesidlo sasemini, Inyama yehagu yesidlo sasemini, iPremium Luncheon Meat, iHam yoMgangatho oPhezulu, iCanned Choice Ham yehagu enqunqwe ngeHagu, Braised lean, Bamboo Shoots Meat, Idada elinemifuno egciniweyo. , Inyama yehagu(Isikiwe) enemifuno egciniweyo, Inyama yehagu enemifuno egciniweyo, irhanisi egcadiweyo, inyama yehagu kunye neham, Isibindi sehagu enkonkxiweyo,ect.
Buza: Ngaba unayo ibrand yakho? Okanye ukuba ndifuna ibe yibrand yam?
Impendulo: Ewe, sineempawu zethu: Kurhwebo lwangaphandle, uphawu lwethu yiPandian. Eyasekhaya, sineempawu ezininzi: iFudian, iGuanghao, iShengxiang, njl. Kananjalo ungasebenzisa eyakho ibhrendi, kuxhomekeke kuwe.
Buza: Ngaba inkampani yakho inazo izatifikethi ukuze sikukholelwe?
Impendulo: Ewe, sineziqinisekiso ezithile. Ungacofa le sayithi ukuze wazi iinkcukacha malunga nezatifikethi zethu.
Ngaphambili: 340g yenkomo yenkomo yesidlo sasemini Inyama
Okulandelayo: I-Curry yenkomo yenkomo enkonkxiweyo Ukutya okuKhawuleza
Inyama yehagu yesidlo sasemini, Inyama yehagu enkonkxiweyo, I-Canning Beef Brisket, Inkukhu enkonkxiweyo, Iinyama ezinkonkxiweyo zokusinda, Idada Eliqhotsiweyo elinkonkxiweyo,